Gbasara Anyị - Nantong SuTong Nkewa Technology Co., Ltd.
Nantong Sutong Nkewa Technology Co., Ltd. (dịrị gaba n'ime ebe: SUTONG) na-a ụlọ ọrụ pụrụ iche imewe na imewe nke ụlọ elu internals, mbukota, ụlọ elu trays na usoro nke ike ịzọpụta. Tumadi ịzụlite mmepụta, ule na engineering ọrụ nke uka nyefe na nkewa na Chemical, Petrochemical, refainari, fatịlaịza, Oil & Gas na Environmental Protection ebe. The mkpa Filiks na-agụnye rectification, absorption, mmịpụta, imu, evaporation, agba na n'efu mmiri ọgwụgwọ nke ulo-elu nkewa, nwekwara tinyere imewe nke ájá iyo na demister na Environmental Protection. Anyị nwere ike inye ukwuu ọkachamara Engineering & Technology ọrụ, dozie ọtụtụ siri Engineering nsogbu dị iche iche ebe.
SUTONG bụ a mba High-tech ụlọ ọrụ, na nominated soplaya Sinopec Group, na nominated ụlọ ọrụ nke National Technology Center nke Chemical Engineering Design, nnyocha na-emepe emepe isi na naanị otu onye nominated emeputa nke Nanjing University Nkewa Division, na nominated emeputa nke East China University of Science and Technology. Anyị na-ike enyi na enyi imekọ ihe ọnụ na ama Design Institutes na Scientific Research Institute.
Anyị na-enye a zuru ezu oru ize, engineering imewe, echichi, nyere ule na isi-anapụta oru ngo, enye ndụ akwụkwọ ikike na-eme oru ngo. Anyị na-enye anyị na ndị ahịa nke kacha mma ọnụ ụlọ elu mbukota, trays na ụlọ elu internals ezi mma, bara uru na ịba uru na elu - arụmọrụ. Anyị nwere ike na-enye na-echebara ọrụ, na-eme ngwa ngwa ka ahịa maka research.
* School-ọsọ Enterprises, tupu 1986
Research & Mepụtara Direction: Random packings
* Nnweta na School-ọsọ Enterprises, SUTONG mmalite. 1986
Research& mepụtara Direction: random packings & ahaziri packings
* Soro akwụkwọ nke Tower mbukota ụzụ Manual. 1995
Research& mepụtara Direction: Professional ụlọ elu internals na packings
* Site na mmepụta technology. The 1st mwepụ, okpukpu abụọ na ọnụ ọgụgụ, ihe karịrị 13340 m2. 2003
-Arụkọ ọrụ na Nkewa Research Center nke Nanjing University& East China University of Science and Technology. SuTong R&D Department e guzobere, ịbụ a guzo kansul unit nke CIESC Journal. Jikọọ na National Chemical Design& Technology Center.
* The 2nd mwepụ, okpukpu abụọ na ọnụ ọgụgụ, ihe karịrị 26680 m2. 2010
Soro na usoro imewe, enye usoro ngwugwu. Kwusaa mba High-tech Enterprise ọma. Bụrụnụ ndị nominated soplaya Sinopec Group. Na-ekwenyere Tsinghua University na ịzụlite ọhụrụ ụdị packings.
2006-Ruo ugbu a
* 3rd mgbasa, ẹkenam zuru ụwa ọnụ na-eduga mmepụta akara, ngụkọta ego banyere 8 nde RMB.
* Raara Onwe na research & mmepe ụzọ nke ọkachamara kọlụm internals na packings oge niile.